Tallaabadii uu qaaday Abiy oo caddeysay dagaalka uu ku hayo Soomaalida – Kismaayo24 News Agency
Tallaabadii uu qaaday Abiy oo caddeysay dagaalka uu ku hayo Soomaalida
by Mohamed Abdirashid Abaajo 11th February 2019 056
Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo dhowaan magacaabay guddiga xallinta khilaafaadka xudduudaha iyo dib-u-heshiisiinta ee dalka, ayaa 41 xubnood oo gudigaas ka kooban yahay Soomaalida ka siiyey 1 xubin oo keliya, halka Tigreega laga siiyey 12 xubnood.
Xubnaha guddigaas ee dhanka diimaha waxa uu ra’iisul wasaare Abiy ku soo daray baadariyaasha madaahibta Kiristaanka oo dhan, halka Culimada Soomaalida aan waxba lagaga darin oo doorkii Islaamka la siiyey wadaaddo oromo ah
Arrintan ayaa la leeyahay in looga goleeyahay in dhulka lagu muransan yahay Oromadu qaadato, maadaama aan Soomaalidu miiska wada hadalka iyo dib-u-heshiisiinta joogin.
Aqoonyahan Faysal Rooble oo ah qoraa ka faallooda siyaasada Geeska Afrika ayaa wareysi uu bixiyey kaga hadlay waxa ay arrintan ka dhigan tahay iyo inay caddeyn u tahay dagaalka uu Abiy ku hayo Soomaalida.
Tarsan oo qeyliyey “Homeless ayaan Nairobi ku ahay, dhaqaale ma haysto”
Warbixin: heshiiski kadib maxaa Kismaayo iska badalay???
Fariin ku socota Jaaliyada Galmudug ee Dalka Maraykanka.